Magetsi Fence Factory, Vatengesi - China Electric Fence Vagadziri
ZVINODZIVA ZVEMA plastiki
Plastiki Insulator, iyo yese inonzi mazita sevhariri Insulators, sikuru-mune mhete insulators, premium yemagetsi fenzi-mune mhete insulators, emagetsi mhete insulators, fenzi insulators, epurasitiki sikuruu mune insulators, huni post mhete insulator, zvichingodaro.
Kubva kuzita rekupedzisira, huni posvo mhete insulator, iwe unogona kudzidza kuti epurasitiki insulator yekukodzera waya kumatanda emapango
PLASTIC GEDHI HANDURE
Bato repurasitiki regedhi rakagadzirirwa kushandiswa pane gedhi remagetsi fenzi. Iyo yechinyakare mashandiro eiyi epurasitiki fenzi gedhi mubato inopa kunetsekana. Iri gedhi rekudhonza mubato rine plastiki, yakasununguka kubata, uye yakafukidzwa nesimbi zvikamu. Shandisa iyi yemagetsi fenzi gedhi mubato kuti usazvibate magetsi kana uchivhura gedhi.
Masuwo epurasitiki anobata anowanzo gadzirwa ne polypropylene (PP), pamwe neyakaipisa simbi yakakwenenzverwa. Kunze kwepolypropylene (PP), inogona zvakare kugadzirwa nerabha. Saka pachave neimwe yerabha gedhi mubato wesarudzo yako.
PLASTIC Fenzi YEMAHARA
Plastiki fenzi waya, iwe unogona zvakare kuidana seyemagetsi fenzi poly waya, yemagetsi tambo fenzi, yemagetsi fenzi tambo, fenzi tambo, yemagetsi fenzi waya, yakarukwa yemagetsi fenzi tambo.
Plastiki fenzi waya ndeye tambo yakasungwa-tambo, yakatetepa iyo inowanzo sanganisira inoitisa simbi waya uye polima tambo Zvinoenderana neukobvu, iyo inogona kuve yakakamurwa kuita epurasitiki fenzi poly waya uye epurasitiki fenzi poly tambo.
Iyo yepurasitiki fenzi posvo, inogona kutumidzwawo seyedanho-mune poly fenzi positi, nhanho-mune posvo, epurasitiki yekutsika-mukati positi, poly fenzi positi, yemagetsi fenzi posvo.
Iyi epurasitiki fenzi posvo inogona kukurumidza kumisikidzwa yekuvakira inzvimbo chero yepanze nzvimbo. Gadzira yako yakakomberedza pendi nekuisa iyi epurasitiki nhanho-mune poly fenzi positi uye wozomhanya yako fenzi mutsetse pakati pezvakawanda mbiru.